Home News Bangiga Adunka oo beeniyay in uu lacag dayn (loan) siiyay Somaliya iyo...
Bangiga Adunka oo beeniyay in uu lacag dayn (loan) siiyay Somaliya iyo DFS oo loo digay! Aqriso warbixnta Baniga
Waxaa labadii maalin ee u danbeeysay soo if baxayay warar been abuur ah oo ay baahiyeen qaar ka mida haya’ddaha iyo mas’uuliyinta dowlada Fedaraalka Somaliy taas oo lagu sheegayo in Baniga Adunka uu markii ugu horeeysay Somaliya siiyay lacag amaah ama dayn ah. Hadlakaan ka soo yeeray mas’uuliyinta Dowlada Somaliya ayaa ah mid been abuur ah oo wax kama jiraan ah. MOL oo la xirirtay Bangiga Adunka Qaybta Somaliya qaabilsan ayaa sheegtay in ayan Somaliya wali gaarin marxalad lacag la daymino laakiin waxa ay sheegeen in ay siiyeen Somaliya lacag sadaqo ah oo horay qayb ka mida loo bixiayay sanadadii la soo dhaafay.
Saraakiisha Geoff Handley iyo John Randa oo mamula barnamaijka Soomaliya aya sheegay in ayan Somaliya amaah (loan) aan la siinin. Waxa ayna sheegeen in ayan garanaynin meesha hadalakaas ka yimid.
Wasiirka Maaliyadda iyo Xafiiska Ra’isal Wasaaraha Somaliya oo horay looga bartay been abuur iyo buun-buuninta hadal aan xaqiiq ku fadhiyin ayaa shacabka u sheegay in Somaliya lacag amaah ah la siiyay. Waxaa nasiib xumo ah in Baniga Aduunka beenayo hadlakaas been abuurka ah kuna timaamo hoganka Somaliya mid aan daacad ka ahayn da’dalaada loogu jiro in Somaliya dib loogu soo celiyo hanaanka Caalamiga ah.
Qorshaha iskaashiga wada jirka ah ee Soomaaliya iyo Bangiga Adduunka (2019-2022)ee uu Madaxweynuhu sheegaya ee uu rabo inuu ku amaano Kheyre iyo Dawladiisa Fadhiidka ah waa been. Mashurrcan waxay dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud soo bilowday June 25, 2015 waxaana loogu talagalay inuu socdo ilaa 2020, haddoo ay waxa ka soo haraanna loo gudbiyo 2020- 2022. Mashrucaas waxaa uu ahaa $144 Milyaln, waxaa laga isticmaalay $64 maadama ay laba sano ka dhiman tahay cimriga mashruuca. Haddaba $80 Milyan oo ka soo haatay ayaa waxaa loo wareejiyey 2019-2022. Haddaba waa lacagtaas $80 Milyan. Dawladdaan oo been iyo faan isku darsatay waa gar inay ku faanaan waaayo Bangiga ayaa shaki weyn ka qabay mashruucaan sida ay dawladdaan u maamuleyso waxaanu qarka u saarnaa in gebi ahaanba la joojiyo.
Shaxdan hoose ayeyna ka muuqdaan dhammaan mashaariicda Socda (active Projects) ee ay banging aduunka maalgeliyaan, waxaana dhamaantood soo bilowdaay Dawladdii Xasan sheekh Marka seddex mashruuc oo saxeex sugayey laga reebo, kuwaas oo ah kuwa u dambeeya. Laakiin farqiga labada dawladood u dhaxeeya ayaa ah inay tan ku faanto waxa aysan qaban, iyado dowladdii hore muhimadda ay ahayd in wax la qabto, laakiin aan la buunbuunin maadaama sababta ay u joogaan aya ahayad inay wax qabtaan.
Ugu dambeyn Somalida hadda intin hore waa ka caqli badan yihiin, waana ka waddanisan yihiin intii hore marka been laguna ii wadi karo.
Warbixinta oo dhameystiran halkaan ka arag
Previous articleRuux lagu Dilay Degmada Warta-Nabadda Ee Gobolka Banaadir!
Next articleTaliye ku Xigeenka Sirdoonka dalka Sacuudiga oo booqday Somaliland?
Muqdisho Online main headquarter is in Mogadishu, Somalia, but the office remains anonymous, because of constant threats against its staff. Email us at [email protected]
C/raxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay Mooshinka Lagasoo Abaabulay Xafiiska Kheeyre!!
Taliyaha Ciidamada Dhulka Soomaalia oo ka hadlay Weerarkii Xalay lagu qaaday